Daraasad Cusub Oo Daaha Ka Rogtay Wadamada Ay Ka Soo Jeedaan Ciyaartoyda Kooxaha Premier Leaque-ga Waqtiga Ugu Badan U Saftay Xili Ciyaareedkan 2016/17 Warbxin
Sunday June, 24 2018 - 09:55:37
Wednesday January 04, 2017 - 02:25:57 in by Burco Office
Waxaa jira ciyaartoy tiro badan oo ka soo yeeda wadamo kala duwan oo ka ciyaaraha horyaalka xiisaha badan ee Premier Leaque-ga waxayna koox kastaaba haysataa ciyaartoy ka so kala jeeda wadamo iyo qaarado kala duwan. Ugu dhawaan ciyaartoyda wamada adu
Waxaa jira ciyaartoy tiro badan oo ka soo yeeda wadamo kala duwan oo ka ciyaaraha horyaalka xiisaha badan ee Premier Leaque-ga waxayna koox kastaaba haysataa ciyaartoy ka so kala jeeda wadamo iyo qaarado kala duwan. Ugu dhawaan ciyaartoyda wamada aduunka ayaa hadda ka ciyaara premier Leaque-ga iyada oo ay jiraan ciyaartoy badan oo qaaradaha aduunka uga kala yimid PL.
Goolkii ugu horeeyay ee uu xidiga Manchester United ee Mkhitaryan uu ka dhaliyay Premier Leaque-ga kulankii Tottenham ayuu ku noqday xidigii 96 aad ee wadamo kala duwan ka soo yeeda oo horyaalka Premier leaque-ga gool ka dhaliyay waxaana sidoo kale jira wadamo ay ciyaartoydoodu ka ciyaarto Premier Leaque-ga oo aan wali goolal dhalin taas oo muujinaysa sida ay wadamada aduunku ugu badan yihiin Premier Leaque-ga.
Haddaba daraasad cusub oo uu Sky Sports ka sameeyay ciyaartoyda Premier Leaque-ga, wadamada ay ka soo jeedaan iyo daqiiqadihii ay xili ciyaareedkan 2016/17 u safteen kooxaha ree England ayaa la soo bandhigay waxayna kooxuhu ku kala duwan yihiin ciyaartoyda daqiiqadaha ugu badan u ciyaaray wamada ay ka soo jeedaan.
Ciyaartoyda ka soo jeedada wadamada Spain, England, Argentina iyo France ayaa noqday xidigaha daqiiqadaha ugu badan xili ciyaareedkan kooxaha Premier Leaque-ga uga soo muuqday Premier Leauqe-ga, waxaana xogtan ku jira ilaa kulamadii 19 aad ee kala badhka xili ciyaareedka Premir Leaque-ga.
Kooxda Arsenal ayaa boqolkiiba 19.94% ay daqiiqdaha ugu badan u ciyaareen xidigo ree Spain ahi waana wadanka kowaad ee ay ciyaartoydiisu Gunners waqtiga ugu badan xili ciyaareedkan u safteen halka France (16.79%) iyo England (14.64%) ay yihiin wamada labaad iyo saddexaad ee ay xidigaha ka soo jeedaa waqtiga ugu badan u safteen Gunners.
Sidoo kale ciyaartoyda ree Spain ayaa kaalinta kowaad kaga jira kooxda Chelsea waxayna safteen boqolkiiba 30.99% waana ciyaartoyda waqtiga ugu badan ka soo muuqday kooxda Conte. Laakiin kooxaha ugu badan ayay ciyaartoyda ree England u tahay kuwa daqiiqadaha ugu badan u saftay. Haddaba wadankee ayay kooxdaadu ciyaartoydeeda waqtiga ugu badan u isticmaashay kulamadii Premier Leaque-ga?
Haddaba halkan kaga bogo koox kasta wadamada ay ciyaartoydoodu waqtiga ugu badan u safteen w iyada oo qaybta ay ku qoran tahay‘First Nation’ay ku jiraan ciyaartoyda ay kooxihi waqtiga ugu badan xili ciyaareedkan kooxdeeda u isticmaashay, sidoo kale qaybta ay ku qoran tayay‘Second Nation’Waxaa ku jira ciyaartoy kaalinta labaad u ah koox kasta ee daqiiqaha ugu badan ka soo ciyaaray haka qaybta‘Third Nation’ay ku jiraan wadamada ay ciyartoydoodu kaalinta saddexaad kag jiraan xidigaha inta ugu badan la isticmaalay xili ciyaareedkan.